Namuhla, asikho isidingo ukuthenga disk ezibizayo ukubuka ama-movie zakho ozithandayo. I-intanethi inikela a multimedia khulula inthanethi. Ukuze ubuke kalula isihambile abasebenzisi njengoba qapha usebenzisa esibukweni TV. Kulesi sihloko, sibheka indlela ukuxhuma ikhompyutha yakho ku-TV nge-HDMI.
Inzuzo enkulu yale isibononisi ukusekela isinqumo ephakeme kunaleyo ayikwazi ngizibonge VGA-isixhumi. Ngo-TV amadala ukuxhuma kumadivaysi angaphandle elisetshenziswe kaningi incembe, nezisekelo entsha isivele olunikezwa yocezuningi.
Ukuze uxhume imodeli ubudala TV, kuyodingeka zama, ngoba ukufuna ikhebula efanelekayo ne interface lesifanele musa njalo ukuqeda ngempumelelo. Kunoma ikuphi, ukusiza abasebenzisi njalo ukuza adaptha ekhethekile. Kodwa khumbula - emalungeni kancane, ngcono isithombe. Ngakho uma uthola ithuba ukuthenga ikhebuli kwezixhumanisi kwesokudla, kungcono ukubeka eceleni ukusetshenziswa adapters.
Ngaphambi xhuma i-laptop ne-TV yakho ngaphezulu kwe-HDMI, kufanele sihlole ngokuningiliziwe kokubili kudivayisi interface. Ikhebula wathola? Siqala uxhumano. Ekuqaleni, kumele ukhiphe intambo ixhunyiwe. Uma TV ine S-Isiqophi, bese usebenzise kangcono, Nokho, it is hhayi Kunconywa ukuba axhunywa ku-TV ukusebenzisa DVI, njengoba ubona esithombeni Kuyophumela ethubeni eliphansi kakhulu.
Ngakho indlela ukuxhuma yocezuningi nje ngeke kucatshangelwe imibala uxhumano elinye (uma i-TV yakho ixhunywe Tulip). Ngemva amadivayisi axhunyiwe, i-TV sivuliwe, ngakho-ke i-computer. Ngaleso sikhathi, lapho kuyoba ukulayisha yesistimu yokusebenza, isikrini ngeke ukulotha. Lokhu kusho ukuthi kukhona uxhumano nedivayisi yangaphandle. Kuyadingeka ukuba ushintshele TV okokufaka kwezinto ezilalelwayo nezibukelwayo (AV ku elawulwa kude kuyisihluthulelo). Ngakho kukhona uxhumano zangaphandle isignali okufakwayo.
Kodwa indlela xhuma i-laptop ne-TV yakho ngaphezulu kwe-HDMI, uma kukhadi lakho levidiyo akaboni idivayisi? Kulokhu, kufanele ushintshe ezinye izilungiselelo ikhompyutha. Bazokusiza ukucacisa qapha yangaphandle futhi imenze ke isithombe.
Esikhathini izakhiwo adaptha isiqophi kuyadingeka ukukhomba qapha entsha. Uma usebenzisa entsha yesistimu yokusebenza ye-Windows 7, qhebeza okukodwa kwideskithophu, ewindini lengxoxo lapho kumelwe ukhethe kwemigomo isinqumo isihenqo. inkinobho "Thola", cindezela imenyu elivelayo. Futhi ye-TV isithombe.
Ngakho indlela ukuxhuma laptop ku-TV nge ikhebuli ye-HDMI kungenziwa obuphelele fixed, kutuswa ukuba banake lingakanani uma uthenga. Kuye kuthiwe ukuthi ukusetshenziswa adapters ibe nomphumela ongemuhle kwi ikhwalithi yesithombe. Akunconyelwe Thenga ikhebula ubude ngamamitha amabili, njengoba kuthinta ukumelana umqhubi, lapho intambo kuyinto ngokweqile isignali eside akusho ngokugcwele sihamba kancane muffling ke.
Sibonile kanjani ukuxhuma laptop yakho ku-TV yakho nge-HDMI. Nge nalokhu, isidingo badlali abahlanganayo ukuze wonke kukhompyutha umndeni qapha ubalekela ngawodwana, ngoba manje ungabuka show kwakho okuthandayo inthanethi esikrinini esikhulu. Abanye abasebenzisi balawule ukufihla intambo kusukela nekhompyutha ku-TV ngemuva ibhodi skirting, esemgwaqweni egunjini elikhethekile. Nokho, kuzonisiza bona anikele ikhwalithi yesithombe, ngoba ukuze ufihle ikhebula, kubalulekile ukusebenzisa intambo eside.
Router TP-Link TL-WR841N: isethaphu, ubuyekeze imodeli kanye Google +
Eqinisweni, indlela ukuxhuma a induku yokudlala, akunandaba
City baseRudny, Kazakhstan: incazelo, ezindaweni ezithakazelisayo, izithombe
Isonto lika-Eletskaya neLebedyan: Umlando kanye nesimanje